न्यादी हाइड्रोपावरको आइपिओ बिक्री खुला, कसले कति पाउँछन् आवेदन दिन ?
आयोजना प्रभावित क्षेत्र लमजुङका बासिन्दाका लागि छुट्याइएको रु १०० अङ्कित मूल्यका १५ लाख कित्ता सेयर र संस्थापक सेयरधनी संस्थाका कर्मचारीका लागि छुट्याइएको तीन लाख कित्ता सेयर गरी १८ लाख कित्ता सेयर गत भदौ १ देखि निष्काशन खुला गरिएको र त्यसको बाँडफाँटसमेत भइसकेको छ । रासस
आईपीओ निष्कासन गर्दै हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स
दोहोरो अंकले उकालो लाग्यो शेयर बजार
सामलिङ्ग पावरको आईपीओ बाँडफाँट, कति जनाले पाउँछन् ?
सामलिङ्ग पावरको आईपीओ बाँडफाँटको दिन तोकियो, कति जनाले पाउँछन् ?
तपाईलाई मध्य भोटेकोशीको आइपिओ पर्यो ? नतिजा यसरी हेर्न सकिन्छ है !